SomaliTalk.com » Weriye Yuusuf Keynaan oo lagu dilay qarax Muqdisho
Ra’iisul Wasaare Cabdiwali “Qaraxii lagu dilay wariye Keynaan waa mid laga dheehan karo nacaybka ay nabaddiidku u qabaan saxaafada xorta ah”
Muqdisho, 21 June, 2014 — Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiwali Sheekh Axmed ayaa si kulul u cambaareeyay dilkii foosha xumaa ee loo gaystay wariye Yuusuf Axmed Abuukar Keynaan, oo ku geeriyooday qarax saaka lagu xiray gaarigiisa. Wariyaha ayaa ka mid ahaa suxufiyinta ka howlgala Idaacadaha Mustaqbal iyo Ergo oo ka shaqaysa arrimaha bani’aadamnimada.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa tacsi tiiraanyo leh u direy qoyskii iyo qaraabadii wariyaha asagoo sidoo kalena u tacsiyeeyay bahda saxaafadda Soomaaliyeed gaar ahaan asxaabtii uu la shaqaynayay. Wuxuu caddeeyay in ay dawladdu sii wadi doonto dagaalka ya kula jirto kuwa gumaadka ku haya Soomaaliyeed.
Rai’iisul Wasaaruhu wuxuu yiri:
“Innaa Lillaahi wa inaan ileyhi raajicuun, geeridu waa xaq, noole walbana wuxuu marayaa dhimasho. Waxaana Eebbe uga baryayaa inuu Janadii Fardowsa ka waraabiyo Wariye Yuusuf Abuukar, dhammaan ummadda Soomaaliyeed, eheladii iyo asxaabtiisana Samir iyo IIMAAN ka siiyo.
“Dilka loo geystay wariye kenyaan wuxuu calaamad u yahay dhibaatada ay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ku hayaan kooxaha dhagar-qabayaasha ah. Waxay laamaha ammaanku dadaal ugu jiraan inay gacanta ku dhigaan dambiileyaashii dilkan naxdinta leh geystay si sharciga loo hor keeno.
“Runtii aad iyo aad ayay ii dhibaysaa inaan maqlo muwaadin Soomaaliyeed ayaa ku dhintay qarax ama la dilay. Waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed inay gacan siiyaan laamaha ammaanka si looga adkaado dadka dulmiga ka dhex wada ummaddeenna”
Ra’iisal Wasaaraha ayaa ku tilmamay falkaas mid naxariis daro oo aan loo nisbayn karin diinta Islaamka isla markaana aan raad ku lahayn dhaqanka Soomaaliyeed.
Wasiirka Warfaafinta oo si kulul u Cambaareeyey dilkii Wariye Yusuf Keynaan
Mogadishu, 21 June 2014 – Wasiirka Warfaafinta, Mudane Mustafa Duhulow ayaa si adag falkan dilka ah ee loo geystay Yusuf Ahmed Abukar (Keynaan) oo maanta gaarigiisa qarax lala beegsday, halkaas oo uu ku geeriyooday. Innaa Lillaahi Wa Inaa Illaahu Raajicuun, Geeridu waa xaq.
Wasiirka oo maanta ka qeybgalay aaskii wariyaha ayaa ka tacsiyeeyey geerida Yusuf Keynaan oo yiri “Innaa Lillaahi Wa Innaa Illaahu Raajicuun, geeridu waa xaq, waxaana tacsi u dirayaa qoyskii, asxaabtii, dhamaan bahda warbaahinta , maamulka Mustaqbal Radiyo iyo Ergo Radiyo iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed. Waxaan EEBBE uga baryayaa inuu Janadii Fardowsa ka waraabiyo. AAMIIN.”
“Yusuf Keynaan waxuu ahaa shaqsi mustaqbal wanaagsan leh oo door wanaagsan ka soo qaatay warbaahinta dalka oo uu Tifatire ka ahaa Radiyo Mustaqbal isla markaana u shaqeynayey Radiyo Ergo ee ka hadlaya arrimaha gargaarka bani’aadanimo. Wariye Keynaan waxuu ku guuleystay bilad 2013 oo uu ku muteystay howl karnimo iyo shaqo dheeri ah. Kooxaha nabad-diidka ah ee caadeystay inay bartilmaameystaan wariyeyaasha waxa ay doonayaan waa inay warbaahinta Soomaaliyeed aamusiyaan, hase yeeshee waxaan ugu baaqayaa dhammaan bahda warbaahinta inay sii labalaabaan doorkooda muhiimka u ah shacabka si loo tuso kooxahan nabad-diidka ah inaysan marnaba ku guuleysan inay warbaahinta aamusiyaan.”
Wasiirka ayaa ugu danbeyntii sheegay in hay’adaha ammaanka ay baaris dhab ah sameyn doonaan si sharciga loola tiigsado ciddii ka danbeysey dilka. Waxaana ugu baaqayaa bahda warbaahinta inay taxadar qabaan.
Wasaaradda Warfaafinta, Somalia